6 Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan Barzakh Samsung Recovery saxar ah
Inta badan laptops Samsung la iman hore abuuray Barzakh Samsung Recovery ah waqtiga wax iibsiga, laakiin marka la tirtiro aqoonta lagu jiro partitioning disk adag iyada oo aan, waxaa loo baahan yahay si ay u cilinta.
1. Sida loo abuuro Barzakh Samsung Recovery
Dadka intooda ugu badan, habka abuurista ah Barzakh, Samsung Recovery waa dhul aan la garanayn. By isticmaalaya talaabooyin yar oo sahlan, waxa lagu gaari karo. Halkan sida:
-Waxaa USB-HDD u baahan yahay in la sameeyo qalabka boot hore.
-Now, Ee USB Samsung Recovery Xalka Admin Tool qalinka drive waa in la geliyo laptop (ama desktop, sidii loo baahdo).
-Booting Waa in la sameeyaa ka USB.
Habka -Madaxa Samsung Recovery Xalka bilaabo intaas ka dib.
-Next Yimaado doorasho ee gujinaya 'initialize ka Hard Disk Drive ".
Xaqiijin -Wararka u baahan yahay in la siiyo. Sidaas, 'Haa' waa in la riixi.
Gabiley in loo baahan yahay in la qeexo 'Size of Recovery Area' sida 20 GB. Marka sameeyo, 'Next' waa in la riixi.
-After Samayn, "OK 'waa in loo doortay. Partitioning waxay sii wadi kartaa sidii caadiga ahayd.
Habka -Madaxweynaha qaadataa waqti qaar ka mid ah, si si wanaagsan ay u sugto dhowr daqiiqo
Partitioning -After waa dhameystiran, "Recovery Area Rakibaadda 'waa in la sii, raaceen adigoo gujinaya' OK '.
-Wararka New window weydiiyo 'Continue Rakibaadda'. Sidaas dooran 'OK'.
-After Sugaya daqiiqado yar, ka 'Recovery Deegaanka' lagu rakibi doonaa
-Now, Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo hadii MBR waxaa loo baahan yahay in la hagaajiyo. Sidaas guji "OK '.
-After Dhalato MBR la dhamaystiro, "OK 'waa in la riixi.
Gabiley noqon kartaa su'aal haddii qof doonayo in uu ku daro xaaladda image hore si ay meesha soo kabashada ka USB ama DVD. Waxa fiican in ay ku dhufo "Cancel '. Haddii hayaan la sameeyey, ka dibna riix 'OK'.
-Now, Rakibaadda cajalid Windows waa in la geliyo iyo 'OK' riixi.
Waa -Windows la formatted oo lagu rakibay on laptop ah.
Ama raysashada socon codsiga, 'ah oo Toogtay' waa in la riixi on Tallaabada 1 iyo Samsung Xalka Codsiga Recovery 'lagu rakibi karo.
Computer -Waxaa la billaabeen karaan, ka dibna nidaamka, xoojiyaa. Just adigoo riixaya F4, soo celinta waa suurto gal waqtiga ahaan.
2. Sidee si ay u helaan Barzakh Samsung Recovery
Helitaanka xijaab Samsung Recovery waa uun qayb kale oo geeddi-socodka in markii hore la abuuray. Waxaa loo baahan yahay in la soo celiyo nidaamka in goobaha warshad dib. Halkan sida:
Xogta -Any oo u baahan in si fiican loo kaydiyaa waa in ay leeyihiin gurmad ah ka hor inta aan fulineynin warshadda soo celiyo, sida ay u badan tahay in ay tirtirto oo dhan ugu weyn ee files, fayl iyo barnaamijyada lagu rakibay in laptop ah.
-Now, Waxaa wanaagsan in la bilaabi-up ama dib-u-boot laptop ah.
-Ugu Waqtiga habka bilowga ah, waxaa muhiim ah in riix F muhiim ah oo ku habboon ama isku muhiim ah. Wixii Samsung, F4 waa mid ka mid ah. Xaaladdan oo furayaasha ku guuldareystaan ​​in ay ka shaqeeyaan, ka dibna fariinta in shaashada la soo baadhi karo, waayo, ku simaha sida tilmaame u bilowdo nidaamka dib u soo kabashada. Waxaa jiri kara marar xijaab soo kabashada maqan yahay in laptop ah, si ka fiican in aad la xiriirto la soo saaraha.
-Instructions Sida lagu soo sharxay shaashadda ku saabsan dacwada waa in la raacaa. Waxay qaadan doontaa waqti ka mid ah laakiin fariin muuqdo inuu leh u soo celin la dhammeeyo.
3. "Haddii xijaab kabashada la tirtiray, Samsung Recovery Xalka doonaa function mar dambe. Marka la tirtiro, waxaa jira jid ay cilinta xijaab soo kabashada." Ma run ah?
Haddii ay run tahay ama aan ama kaliya tallaabooyinkan ammaan Diintooda ah ama si fudud fikrad Samsung ayaa, waa adag tahay in la yiri. Laakiin mararka yar, waxaa la arkay in ay dib u soo celinta halka xijaab kabashada on PC kale waqti in dayactir disc, waxaa ay aheyd natiijo fiican lahayn. Waa inay jiraan wax la mid ah taageero Samsung in sacaadda karo, jiid mid ka mid ah RUT ah.
4. Sida loo tirtiri Risaalo Recovery maqan on laptop Samsung
Guud ahaan, waxaad qaadan kartaa in talaabooyinka soo socda:
-Open Dariishaddii degdeg ah amarka iyo diskpart nooca.
-Now Galaan amarka 'rescan' iyo riix 'geli' muhiim ah.
-Type In liiska disk iyo saxaafadda galaan.
Nooca -Now 'dooro disk 0' iyo saxaafadda galaan.
Risaalo liiska -Type iyo saxaafadda galaan muhiim ah.
Dooro -Find xijaab 3 iyo saxaafadda galaan.
-Type In diidmada xijaab delete iyo saxaafadda galaan.
5. Sida loo Gadzhiyev oo dib u soo nooleeyaan ah Barzakh, Samsung Recovery
Soo celinta ah Barzakh, Samsung Recovery noqon karaan kuwo shaqo u cabbudhinayo. Cloning Risaalo waa doorasho wanaagsan. Waxaa jira diyaariyeen ah ee nidaamka software cloning disk isticmaalaan sida Clonezilla, Ruuxa ama Paragon badan, la magacaabo wax yar. Ka dib markii cloning, dib u soo celinta iyo wax walba oo ka shaqeeya si la mid ah ayaa la filayaa.
Inta badan, su'aal weli haddii xijaab soo kabashada waxaa loo baahan yahay haddii Gadzhiyev oo ka qoqobkii ugu weyn waa joogo. Laakiin waa ay adag tahay si loo ogaado.
6. Haddii Samsung soo kabashada xijaab uma shaqeeyo, waxa laga qaban karo?
Asal ahaan, xijaab Recovery waa ku dhowaad sida meel kale lagu kaydiyo isagoo gurmad ah ee nidaamka qalliinka. System bidbidayaan hab reinstalling image soo kabashada ka goobaha iyo hab software waa waajib. Thanks to Wondershare in qoreysa sida mid ka mid ah qalabka soo kabashada xijaab keentay isagoo fursadaha Falanqeynta ka hor soo kabashada, afar hababka soo kabashada, file kuwaas oo laga badiyay, soo kabashada cayriin, saaxir iyo xijaab, user-friendly interface iyo filter iyo raadin file magac, xogta, doorasho size waa yar yihiin sifooyin kale ka dhigaya Wondershare jecel kulul.
Wondershare Data Recovery waa barnaamij in e unbaa odhan karaa sidoo kale in ay xalka arrimaha iyo waxa ay sidoo kale la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xusay in dadka isticmaala ay arrintan la xiriira waa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay ka sameeyaan waa halkan iyo qasabno oo kaliya dhowr user awood u yeelan doonaan in la hubiyo in barnaamijka la geliyo oo gobolka ka mid ah habka farshaxanka uu leeyahay la raacin. Barnaamijku waxa uu la soo saaray labada laylis iyo sidoo kale dadka isticmaala khabiir si uu u hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo kulan natiijada ayaa sidoo kale la sameeyey sahlan tahay in la raaco. Hoos waxaa ku qoran sawirka barnaamijka:
Si ay u soo kabtaan xogta lumay ama la tirtiro, Wondershare shaqeyn karaa siyaabahan soo socda:
• Marka hore, hab kabashada waa in la soo xulay.
• Ka dibna qalabka, oo kiisaska intooda badan waa PC ah, waa in si fiican la marsiiyey.
• Ugu dambayntii, doorasho Falanqeynta waa in la soo xulay, habka dib u soo kabashada doortay iyo file u badbaadiyey.
La yaab ma laha, qalab ay haatan tahay mid ka mid ah kuwa ugu fadilay, oo la doortay mid ka mid ah daalacashada.
> Resource > Android > 6 Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan Barzakh Samsung Recovery